၂၀၁၈ ခုနှစ် N-Peace Awards အတွက် မဲပေးကြရမယ့်အချိန်ကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။ N-Peace Network ဆိုတာ မြန်မာအပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုနဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေးတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို မြှင်တင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်နဲ့ မထားထားသက် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးပဲ မဲပေးအဆိပြုနိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို http://n-peace.net/vote-now/ မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး မဲပေးနိုင်ပါတယ်။ #NPeaceAwards --------------------------- The voting process for the Individual N-Peace Awards 2018 is now open! N-Peace Network is operating in countries in Asia-Pacific Region including Myanmar to enhance the role of woman in conflict resolution and peace-building. There are two nominees from Myanmar this year - Dr. Cynthia Maung and Ma Htar Htar Thet. Go to http://n-peace.net/vote-now/ to cast your vote now.
စီဒေါဆိုသည်မှာ အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရှင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထားသည့် စံနှုန်းတစ်ခုကို ဖော်ပြထားပါသည်။ စီဒေါသည် တန်းတူညီမျှမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကင်းမှုနှင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ စသည့် အဓိက စည်းမျဉ်းသုံးခုပေါ်တွင် အခြေခံထားပါသည်။ စီဒေါတွင် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့် မိသားစုဆက်ဆံရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာတို့တွင် တည်ရှိနေသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေး ထားပါသည်။ စီဒေါတွင် အပိုဒ် ၁၆ ပိုဒ်ပါရှိပြီး ဖော်ပြပါ ကာတွန်းသည် အပိုဒ် ၇ ကို သရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကာတွန်းကို Equality Myanmar မှ ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ -------------------------- CEDAW stands for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. It providesauniversal standard for women’s human rights and is based on three interrelated core principles: equality, non-discrimination and State obligation. CEDAW addresses discrimination in areas such as education, employment, marriage and family relations, health care, politics, finance and law. There are 16 articles in CEDAW. This cartoon illustrates the Article7and it is provided by Equality Myanmarr #GenderEquality -------------------------- စီဒေါဆိုသညျမှာ အမြိုးသမီးမြားအား နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ ခှဲခွားမှုပပြောကျရေးဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ ကှနျဗငျးရှငျးဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ လူ့အခှငျ့အရေးအတှကျ နိုငျငံတကာမှ လကျခံထားသညျ့ စံနှုနျးတဈခုကို ဖျောပွထားပါသညျ။ စီဒေါသညျ တနျးတူညီမြှမှု၊ ခှဲခွားဆကျဆံခွငျးကငျးမှုနှငျ့ နိုငျငံတျော အစိုးရ၏ တာဝနျဝတ်တရားမြား စသညျ့ အဓိက စညျးမဉျြးသုံးခုပျေါတှငျ အခွခေံထားပါသညျ။ စီဒေါတှငျ ပညာရေး၊ အလုပျအကိုငျ၊ လကျထပျထိမျးမွားမှုနှငျ့ မိသားစုဆကျဆံရေး၊ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု၊ နိုငျငံရေး၊ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ ဥပဒရေေးရာတို့တှငျ တညျရှိနသေညျ့ ခှဲခွားဆကျဆံမှုမြားကို ဖွရှေငျးဆောငျရှကျပေး ထားပါသညျ။ စီဒေါတှငျ အပိုဒျ ၁၆ ပိုဒျပါရှိပွီး ဖျောပွပါ ကာတှနျးသညျ အပိုဒျ ၇ ကို သရုပျဖျောထားခွငျးဖွဈပါသညျ။ ကာတှနျးကို Equality Myanmar မှ ပံ့ပိုးပေးထားပါသညျ